musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » New Zealand Kupwanya Nhau » 3 mamwe COVID-19 makesi akasimbiswa muNew Zealand
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • New Zealand Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mutungamiriri wehurumende, Jacinda Ardern, akataura kuti genome inoteedzana mhedzisiro.
NZ zviitiko zvemunharaunda zve COVID-19 kusvika gumi.
Kukwira muzviverengero zvematambudziko enharaunda zvakakonzera kukiya kwechipiri munyika yose.
Mukoti akazara-akadzivirirwa mukoti weAuckland mumwe wevanhu vakaedza kuvhenekerwa vane COVID-19.
Huwandu hwenzvimbo dzenharaunda dzeNew Zealand dzekoronavirus dzakakwira kusvika gumi neChitatu, mushure memamwe matatu emakesi eDelta eCOVID-10 akasimbiswa nhasi. Mhosva nyowani dzinosanganisira mukoti akazara-akabaiwa kubva kuchipatara cheAuckland.
Zvipfumbamwe zvezviitiko izvi zvakabatana nedzimwe nyaya dzemunharaunda dzakakonzera nyika yechipiri yenyika yepamusoro chepamusoro kukiya kutanga Chipiri pakati pehusiku. Mhosva yasara yakabatanidzwa kumuganhu, sekureva kwe Ministry of Health.
Matatu matsva aya, ayo ese ari mukati Auckland, murume mune makore makumi maviri ari mudiwa wenyaya inozivikanwa, mukadzi ane makore makumi matanhatu ane hukama nemuganhu, uye mukadzi ane makore makumi maviri ane hukama neimwe nyaya yakamhan'arwa kutanga kweChitatu.
Dzimwe nzvimbo dzekufarira dzakaratidzwa dzakawedzerwa kune webhusaiti yebazi rezvehutano, kusanganisira kasino, Avondale College, masupamaketi mazhinji eAuckland, mabhawa nemakamuri, ayo anozovandudzwa zvishoma nezvishoma sezvo dzimwe nzvimbo dzekufarira dzichizivikanwa.
Pasi peAlert Level 4 kukiyiwa, mabhizimusi uye zvikoro zvakavharwa kusara kwezvakakosha zvakaita sesupamaketi nenzvimbo dzekushandira.